दाँत फुकाल्ने दुःखजस्तै राजनीति - Nepal Khoj
होम / हाइलाइट-समाचार / / दाँत फुकाल्ने दुःखजस्तै राजनीति
दाँत फुकाल्ने दुःखजस्तै राजनीति
एक व्यक्ति दाँत दुखेर हैरान भएछ । देखाउन डेन्टिस्टकहाँ गएछ । ‘तपाईंको दाँत किराले खाएको छ, फुकाल्न’पर्छ’, डेन्टिस्टले भनेछ, ‘अरू कुनै उपाय छैन । ऊ फुकाल्न तयार भएछ । डेन्टिस्टले सनासोले च्यापेर दाँत फुत्त तानेछ । तर, अचनाक दाँत मुखमै जिब्रोमाथि झरेछ । आत्तिएको बिरामीले घुटुक्क पारेछ । तर त्यो दाँत निलिएछ घाँटीमै अड्किएछ ।
डेन्टिस्टले टर्च बालेर हेरेछ । दाँत घाँटीमा देखियो । उसले भनेछ, ‘अब यो मेरो एरिया पार गरेर घाँटीमा प’गिसक्यो । म’ख मात्र मेरो क्षेत्र हो । तपाई बरु चाँडै घाँटीसम्बन्धी डाक्टर (ईएनटी विशेषज्ञ) कहाँ जानुहोस् ।’
विरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको थियो । ऊ हतारिएर ईएनटी विशेषज्ञ कहाँ पुगेछ । महँगो टिकट काटेर भित्र छि¥यो । डाक्टरले आँ गर्न लगायो । संयोगवश त्यही बेला दाँत खत्रक्क पेटतिर खसेछ ।
‘मेरो एरियाबाट पार भयो । अब पेटको विशेषज्ञकहाँ जानुहोस् । मबाट पार लाग्दैन यो’, ईएनटी विशेषज्ञले भनेछ र पन्छिएछ । पेट रोगको विशेषज्ञ खोज्दै बिरामी पेटमा दाँत बाकेर भौतारिएछ । बल्ल– बल्ल भेटेर भित्र छिरेछ । डाक्टरले एक्स–रे, भिडियो एक्स–रे आदि गर्न लगाएछ । सबै सकिएपछि थाहा भएछ– दाँत त मलद्वारको मुखमा झरिसकेछ ।
अनि, डाक्टरले भनेछ, ‘हेर्नुहोस्, दाँत मेरो एरिया पार भइसक्यो । अब मलद्वार रोग विशेषज्ञ कहाँ जानुहोस् । ’
ऊ त्यहाँ पनि पुगेछ । मलद्वार रोग विशेषज्ञले टर्च बालेर मलद्वारभित्र हेरेछ । दाँत देखिएछ । त्यो देखेर डाक्टरले आत्तिदै भनेछ, ‘यहाँ त दाँत पो छ । यो मेरो विभागमा परेन । दन्त रोग विशेषज्ञकहाँ जानुहोस्।’
नेपालका राजनीतिक दलहरू ठ्याक्कै यस्तै हालतमा छन् । जनताको सेवामा केन्द्रित हनुपर्ने उनीहरू जनतालाई नै भौतारिन बाध्य पारिरहेका छन् । अहिले देशमा कोरोना महामारी छ । सरकारले लकडाउन गरेको छ । हुनेखानेहरू घरमा मिठोमिठो पकाएर खाइरहेका छन् । नहुनेहरू सडकमा छन् ।
अरू बेला भोट माग्दै तिनै जनताकहाँ पुग्ने सबै दलका कार्यकर्ता डरले कता दुलामा पसेका छन् । समस्यामा परेका सर्वसाधारणलाई सरसहयोग गर्नु पर्ने दायित्व ती राजनीतिक प्राणीको होइन र ?
यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरू सुरक्षित परिचालन हुनुपर्ने थियो । पिर मर्का बुझ्न ती अग्रसर हुनुपथ्र्यो । जनचेतनाका संवाहक बन्नु पथ्र्यो । कोरोना के हो, त्यसबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता परिचालन गरेको भए धेरै सहज हुन्थ्यो ।
दल भनेको जनताका प्रेमका प्रतीक हुनुपर्छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तिनको जिम्मेवारी खड्किन्छ । देशमा त्यो परिस्थिति अहिले आएको छ । मलाई कोरोना सर्छ, यो काम त स्वास्थ्यकर्मीको हो भन्दै पन्छाउनु भनेको मैदानमा पछि पर्नु हो ।
सडकमा खान नपाएकालाई हेर्ने काम सामाजिक संस्थाहरूको हो भनेर पन्छाउनु गैरजिम्मेवारी हो । सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल र संयन्त्र भएका राजनीतिक दल नै हुन् । एउटा दाँत निकाल्ने विषय आधा दर्जन डाक्टरकहाँ पठाउँदा पनि पार नलागेजस्तै राजनीतिमा पन्छाउने प्रवृत्ति हावी हुनु हुँदैन । बेलैमा सोचौं । नत्र पछि परिनेछ ।
Bharath Giri says:
देश र जनताको लागी सोच्नने क्षेमता भएकोे नेतृत्वो लिन सक्ने नेता को आबस्येक्ता भइसकेको छ, एस्तै पारा ले झारा टार्ने काममात्र भैरह्यो भने, देस मा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने लक्ष्येनहरू देखा पर्न थालिसके, एक पटक इतिहास सम्झिने होकी !
AP Sharma says:
“दल भनेको जनताका प्रेमका प्रतीक हुनुपर्छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तिनको जिम्मेवारी खड्किन्छ । देशमा त्यो परिस्थिति अहिले आएको छ । मलाई कोरोना सर्छ, यो काम त स्वास्थ्यकर्मीको हो भन्दै पन्छाउनु भनेको मैदानमा पछि पर्नु हो ।”
Very true Ambika ji our politicians have no ethics n moral value.i pray that gorakhanath will publish them for their inhuman behaviour